About Us - Axnew Asehoy Teknolojia Co., Ltd.
Axnew Display Teknolojia Co., Ltd
Axnew Display Teknolojia Co., Ltd dia nivoatra ny tsena fampisehoana ny orinasa ho toy ny mpitarika ao amin'ny teknolojia miseho.
Nanomboka tamin'ny 2009, Axnew Display Teknolojia Co., Ltd dia nivoatra ny tsena fampisehoana ny orinasa ho toy ny mpitarika ao amin'ny teknolojia miseho. Amin'ny taona matihanina traikefa, varotra sampan-draharaha dia manome fanohanana ara-teknika sy arak'asa soso-kevitra ho an'ny mpanjifa, R & D Aza Tia Tena efa foana hiezaka hanao ny mari sy ny fanomezana ny mpanjifa tsara vahaolana, ny nanana lasa A / D birao sy ny mpanaramaso no nandalo ny indostria fitsirihana ka nahazo ny taona , FCC, Rohs Certificates.
Production vondrona manana manan-karena elektronika singa sy ny loharanon-karena ao amin'ny mpamatsy, maro ny soa be dia be dia hanome ny fitaovana izay mamela antsika ho kokoa, mamokatra, mahomby, ary tena zava-dehibe, dia hanamafy orina ny fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny Axnew sy ny mpanjifa, izay ho Global mpamatsy antsika.
Amin'izao fotoana izao isika dia ho nampitoetra lavitra ezaka fifandraisana amin'ny mpanjifa ao amin'ity orinasa tsipika maneho manerana izao tontolo izao.
AXNEW fampisehoana developes ny raharaham-barotra amin'ny alalan'ny fampirantiana, Alibaba, Global loharano haingana ireo sehatra B2B years.We dia natoky ny mpanjifa izay ahitana orginal mpanamboatra fitaovana, fitaovana fanaraha-maso ny orinasa, automatique fampiharana ireo mpampiasa avy amin'ny firenena mihoatra ny 50.
Tsy mikiry mampiasa ny vaovao sy ny kobany tany am-boalohany, indrindra fa ny orinasa kilasy, noho ny mpanaramaso sy namboarina displays.Our mafy orina indrindra mpamatsy ireo Auo, maranitra, Chimei, Boe, Samsung, FF tontonana.
Namboarina ny entana no soa azon'ny raharaham-barotra. Mpanjifa afaka mizara antsika ny filazalazana momba ny hevitra ary aoka isika hanova ny fitsipika vokatra.
Axnew fanahin'ny vokatra malaza sy tsara, azo itokisana dia manampy antsika ny toro lalan'ny fanompoana manao tsaratsara kokoa.
● Industrial Grade Monitor vahaolana
● Open endriny LCD vahaolana
● Industrial vahaolana mikasika Monitor
● Avo Bright fampisehoana
● Touch Panel pcs vahaolana
Tamin'ny 2009, Axnew'main vokatra no LCD kobany 'varotra raharaham-barotra sy ny fitsipika habeny ny endriny misokatra mpanaramaso.
Tamin'ny 2012, Axnew manana ara-teknika 3-4 injeniera mba hampivelatra ny indostria kilasy mpanaramaso. Nanjary izahay ny biraom-maso ny orinasa amin'ny sakany hafanana (-25 degre ny 80 degre), mba hanohanana ny aseho ao amin'ny tontolo iainana miasa mafy.
Tamin'ny 2014, ny vokatra malaza dia mpomba ny capacitive mikasika mpanaramaso, orinasa touchs amin'ny IP65 bezel ho an'ny tontonana anoloan'ny tendrombohitra, brightess ambony mampiseho ny fampiharana ivelan'ny trano, izay hitondra ny manodidina ny 45% -50% fanondranana boky.
Axnew soa aman-tsara orina mandritra ny fotoana maharitra fifandraisana amin'ny mpanjifa ao amin'ity orinasa tsipika maneho manerana izao tontolo izao. Ny fampisehoana rehetra dia amin'ny taona, FCC, rohs fanajana.
Tamin'ny 2016, ny raharaham-barotra Axnew mitohy sy gurantees fiantohana ny fanompoana, ny sasany mpiara-miasa avy any Alemaina, Kanada afaka manao ny fikarakarana fototra, ny famokarana sy ny fiantohana tena fanompoana ao Shina.
Ankoatra izany, Hong Kong Electronic fampirantiana, Taiwan Computex, Shanghai Touchscreen fampirantiana sns no hanampy antsika mba hampiseho mazava tsara ny vokatra. B2B sehatra, ohatra Alibaba ny mpanjifa dia aoka hanao ny po mora foana.
Amin'ny taona matihanina traikefa isika, dia natoky ny mpanjifa izay ahitana orginal mpanamboatra fitaovana, fitaovana fanaraha-maso ny orinasa, automatique fampiharana ireo mpampiasa avy amin'ny firenena 40 mahery.
Ankehitriny isika dia manomana ny distrubutor voalohany tany Eoropa. Axnew tena miandrandra ny fiaraha-miasa!
Ny ekipa Axnew ahitana ny varotra ivelany Team, varotra an-toerana Team, R & D Center, Financial Sampan-draharahan'ny, Human Sampan-draharahan'ny Resource, Production Factory.
Ekipa tanora izahay, matihanina amin'ny taona traikefa, ny varotra sy ny sampan-draharaha ara-teknika ekipa manome fanohanana ara-teknika sy arak'asa soso-kevitra ho an'ny mpanjifa.
Ny orinasa dia ahitana efitrano madio atrikasa, 2 famokarana andalana, 1 fandoroana efitra, 2 trano fanatobiana entana.
Mpanjifa, izay niara-niasa tamin'ny Axnew dia hahazo ny lavitra ezaka fanohanana afa-tsy raharaham-barotra.
Tongasoa eto amin'ny hifandray antsika maimaim-poana!
1.Once ianao liana amin'ny orinasa ny vokatra, masìna ianao, aza misalasala nanontany antsika .Our varotra sampan-draharaha dia manome fanohanana ara-teknika sy arak'asa soso-kevitra ho anao ao anatin'ny 48 ora, R & D fiarahana miasa dia hiezaka foana hanao ny mari sy manome vahaolana tsara anao.
Mba 2.Every na dia ampahany kely na be ho manaiky ny fikarakarana fandaharam-potoana ho an'ny famokarana sy ny fomba fiasa, izay hentitra mifanaraka amin'ny Enterprise Resource Planning (ERP) fanajana.
3.Professional fanompoana mpanampy no manara-maso amin'ny fananana toe-piainana sy ny sata aorian'ny fivarotana. Manantena izahay fa ny asa fanompoana azo itokisana fitsipika dia aoka isika hametraka ny fifandraisana ny fiaraha-miasa ny Atrik'asa Fifanakalozana.
4.For ny baiko, isika no tena nanao azy ho any an-fiantohana teny rehefa tonga tany amin'ny toerana halehany. Avy eo izy ireo dia ho DOA sy RMA asa ao anatin'ny fiantohana. Raha ny mahazatra dia 1 year fiantohana mba ho fitsipika, dia afaka manolotra ny 2 taona fiantohana raha nanaiky ny mpanjifa. 3 taona fiantohana mety hodinihina miaraka ho an'ny sasany tetikasa manokana.